Trafika harena voajanahary : hotsarain’ny Cites ny minisiteran’ny Tontolo iainana | NewsMada
Trafika harena voajanahary : hotsarain’ny Cites ny minisiteran’ny Tontolo iainana
Par Taratra sur 23/04/2016
Tsy nahafa-po ny rafitra iraisam-pirenena Cites ny asan’ny minisiteran’ny Tontolo iainana teo aloha, mikasika ny fanafoanana ny trafika harena voajanahary mankany ivelany. Andrasany indray ny minisitra vaovao amin’ny volana jolay ho avy izao.
Milaza ny Praiminisitra Mahafaly Olivier fa hotsaraina afaka telo volana ny minisitra tsirairay ary misy ny tondrozotra hitarafana ny asany avy. Tsy misangisangy fa manafay avy hatrany kosa ny vondrona iraisam-pirenena rehefa tsy mahavita ny tokony hataony ny firenena tohanany. Ho an’ny rafitra iraisam-pirenena misahana ny varotra biby sy zavamaniry ahina ho lany tamingana Cites, nosaziana i Madagasikara tsy mahazo manondrana andramena sy ny volombodimpoina (ébène). Andrasany indray ny vokatra azo tsapain-tanan’i Madagasikara amin’ny volana jolay izao.
Mialoha izany, “niantso vonjy” manampahaizana ny fanjakana, avy amin’ny Biraon’ny firenena Mikambana miady amin’ny zavamahadomelina sy ny famonoan’olona (ONUDCC). Iraka ataon’izy ireo ny hijery ny tena zava-misy eto Madagasikara, ny tsy maintsy tokony hatao, ny sakana, tena nampiharina ve ny lalàna, na koa tsy afaka tena manao ny asany ve ny tompon’andraikitra ka misy lalàna sasany tokony hovaina? Manahy ny vao maika haharatsy ny toe-draharaha ireto manampahaizana avy amin’ny ONUDCC ireto raha toa tsy mametraka lasitra iasana tena ho an’ny fanovana.
Ho mafy kokoa ny sazy
Tsiahivina fa nahazo lesona mahery vaika tamin’ny Cites ny mpitondra, ny janoary 2015 teo. Voalazany fa “raha tsy mampiseho finiavana sy misy asa mivaingana miady amin’ny trafika harena voajanahary i Madagasikara, vao mainka hihamafy ny sazy omena azy”.
Efa nanisy teny mikasika ny fomban’ny fanjakana ny tompon’andraikitra araka ny lalàna ao amin’ny Alliance voahary gasy, G. Jasper. Nambarany fa “mampiseho fihetsika sy milaza fa tena hanao zavatra ny fanjakana, nefa tsy manao na inona na inona akory”.
Anisan’ny tena anjakan’ny trafika eto Madagasikara ny andramena, ny sokatra, ny akorandriaka mainty, ny soavalindriaka, sns. Hatreto, tsy nisy niditra am-ponja na iray aza. Niezaka ny Bianco fa navotsotry ny Chaîne pénale indray ny voarohirohy toa an’i Bekasy avy eo. Manara-maso anefa ny Amerikanina, etsy ankilany.